Inzwa ye-infrared ekrelekrele: khanyisa kuphela xa uyifuna, khulula izandla zakho, vula kwaye uvale ngokuzolula
Izipikili kunye ne-epidermal forceps, enobunzima begreyidi egobileyo, zinokucheba i-epidermis kunye nolusu olufileyo lwesandla, kwaye zinokucheba ngokulula kwaye zicoca iindawo ezingekho lula ukuzicoca, ezinje ngemijelo yezikhonkwane.
Ulwenziwo umbala, LOGO yoshicilelo, imveliso nokuvunda, ukhetho eziphathekayo, uyilo simahla
I-GEL POLISH 5 Amanyathelo okuhombisa iinzipho zakho kunye nokuthanda i-Nail Nail yakho iglu yeoyile ukunqanda ezi ngxaki zilandelayo: ukucinywa, akukho lula ukomisa, ukuhlala ixesha elide, umbala awuchanekanga Izixhobo ze-01. evulekileyo Isetyenziswe ngaphambi kokuba unamathele kumbala, thintela iinzipho ekuthini ubutyheli, uxobule kwaye ujije, ngokufanelekileyo ukomeleza ukuqina kunye nexesha elihlala lihleli. Qiniseka ukuba upolishe iinzipho zakho de kungabikho mabala abonakalisayo. Umphezulu emva kokuba ukukhanya incangathi ther ...
Iiwigi emva kokuhlamba, kufuneka zithintele ukukhanya kwelanga ngokuthe ngqo, emoyeni ongenisa umoya ukuya kwi-7 kwindawo eyomileyo, ukutshiza iwigi ekhethekileyo yolwelo, sebenzisa kwakhona ikama yentsimbi ngobunono.
Ikepusi yomnatha yenziwa ngesikhonkwane esenziwe ngesandla nangemishini, ukukhanya, ukubhitya kunye nokuphefumla.
Izinwele ezikumgangatho ophakamileyo zivela kwindawo yobubanzi obuphantsi, iinwele zabantu abahlukeneyo zenziwa ngomatshini ecaleni kwentloko kwaye, inyani yezoqoqosho inesifo, umbala ophelileyo uphezulu ufikelela kwiidigri ezi-6.
Umsebenzi wokufunxa ukubila, ikepusi yomnatha inomsebenzi wokufunxwa kwamanzi nge-hydrophilic, ephefumlayo kwaye epholileyo, kwaye ikwanomsebenzi olungele ulusu.